ဖလင်း ချတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
English: Phleng chāt Thai
ထိုင်းအစိုးရမှ ၁၉၃၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ရက်နေ့ တွင် တရားဝင် သတ်မှတ်ထားသော ထိုင်းအမျိုးသားနိုင်ငံတော် သီချင်း စာသားအား မြင်တွေ့ရစဉ်
Luang Saranupraphan၊ 1939
Phra Chenduriyang၊ ၁၉၃၉
၁၉၃၉ (with current lyrics)
"ထိုင်းအမျိုးသားနိုင်ငံတော်သီချင်း" ( တီးလုံး )
ဖလင်း ချတ် (ထိုင်း: เพลงชาติไทย; အင်္ဂလိပ်: Phleng chāt Thai) သည် ၁၉၃၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ရက်နေ့တွင် တရားဝင် အတည်ပြုထားသော ထိုင်းနိုင်ငံတော် သီချင်း ဖြစ်သည်။ ဂီတသံစဉ် အား Phra Chenduriyang (Peter Veit) မှ သီကုံးပြီး သီချင်းစာသား အား Luang Saranupraphan မှ ရေးသားခဲ့သည်။
ဤ ဆောင်းပါး တွင် Thai National Anthem (en.wikipedia) မှ ဘာသာပြန်ထားမှုများ ပါဝင်သည်။
၁.၁ ၁၉၃၂ ခုနှစ် မတိုင်မီကာလ နိုင်ငံတော်သီချင်း
၁.၂ ၁၉၃၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကာလ နိုင်ငံတော်သီချင်း
၁.၃ ဖလင်းချတ် ဆိုင်ယမ် (Khun Wichitmatra ၏သီချင်းစာသား ၁၉၃၂-၁၉၃၄)
၁.၄ ပထမအကြိမ် နိုင်ငံတော်သီချင်း ပြိုင်ပွဲ (၁၉၃၄)
၁.၅ ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံတော်သီချင်း ပြိုင်ပွဲ
၁.၆ ဖလင်းချတ် ဆိုင်ယမ် (Chan Khamvilai ၏သီချင်းစာသား ၁၉၃၄-၁၉၃၉)
၁၉၃၂ ခုနှစ် မတိုင်မီကာလ နိုင်ငံတော်သီချင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၃၂ ခုနှစ် မတိုင်မီကာလ တွင် Sansoen Phra Barami အား နိုင်ငံတော်သီချင်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
၁၉၃၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကာလ နိုင်ငံတော်သီချင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဖလင်းချတ် သယာမ် နိုင်ငံတော်သီချင်းစာရွက် မျက်နှာဖုံးအား ၁၉၃၃ခုနှစ်၌ တွေ့မြင်ရစဉ်
၁၉၃၂ ခုနှစ် တော်လှန်ရေး ပြီးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း ရက်အနည်းငယ်အတွင်း နိုင်ငံတော်သီချင်းအား ရေးသားသီကုံးခဲ့ပြီး အဆိုပါ ထိုင်း နိုင်ငံတော်သီချင်းအား ၁၉၃၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် အ‌‌ဖြစ် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ မူရင်း သီချင်းစာသားအား Khun Wichitmatra (ခုဏ် ဝိချိဒ်မတြ) မှ ရေးသားခဲ့သည်။
ဖလင်းချတ် ဆိုင်ယမ် (Khun Wichitmatra ၏သီချင်းစာသား ၁၉၃၂-၁၉၃၄)[ပြင်ဆင်ရန်]
ပထမအကြိမ် နိုင်ငံတော်သီချင်း ပြိုင်ပွဲ (၁၉၃၄)[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းအစိုးရသည် တရားဝင်နိုင်ငံတော်သီချင်း အတွက် ဂီတသံစဉ် နှင့် သီချင်းစာသား များ အပါအဝင် ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့သည်။ Jangwang Tua Patayakosol မှ ထိုင်းရိုးရာ တီးလုံးပုံစံ ဖြင့် Phleng Maha Nimit အား ရေးသားသီကုံးခဲ့သော် လည်း Phra Jenduriyang ၏ ဂီတသံစဉ် မှ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။
ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံတော်သီချင်း ပြိုင်ပွဲ[ပြင်ဆင်ရန်]
ပထမအကြိမ်ပြိုင်ပွဲ ပြီးနောက် Phra Jenduriyang ၏ ဂီတသံစဉ် အတွက် သီချင်းစာသားအတွက် ဒုတိယအကြိမ် ပြိုင်ပွဲတစ်ရပ်ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲ အတွက် Khun Wichitmatra ၏ သီချင်းစာသားမှ အနိုင်ရခဲ့သည်။ 
Khun Wichitmatra ၏သီချင်းစာသားနှင့် Chan Khamvilai ၏သီချင်းစာသားများပါဝင်သော နိုင်ငံတော်သီချင်း အား Miss Pratum မှသီဆိုထားသော ထိုင်းအမျိုးသားနိုင်ငံတော်သီချင်း
ဖလင်းချတ် ဆိုင်ယမ် (Chan Khamvilai ၏သီချင်းစာသား ၁၉၃၄-၁၉၃၉)[ပြင်ဆင်ရန်]
နိုင်ငံတော်၏ အမည်နာမ အား သယာမ် မှ ထိုင်း သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ သည့် ၁၉၃၉ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်သီချင်း စာသားအသစ် ဖန်တီးရန်အတွက် အစိုးရမှ ပြိုင်ပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပခဲ့ပြီး Luang Saranupraphan ရေးသားသော သီချင်းစာသား အား ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဆွန်ဂရမ် လွန်ပီးဗူ မှ နိုင်ငံတော်သီချင်းအား နေ့စဉ် နံနက် (၈:၀၀) နာရီ နှင့် ညနေ (၆:၀၀) နာရီ အချိန်များတွင် ထုတ်လွှင့်ရန် နှင့် ပြည်သူများ အနေဖြင့် မတ်တပ်ရပ် အလေးပြုကြရန် အမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်အခါတွင် အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သော နေရာများ (ဥပမာ ကျောင်း ၊ အစိုးရအဆောက်အဦးများ) တွင် နံနက်ပိုင်း နှင့် ညနေပိုင်းများတွင် နိုင်ငံတော်အလံတင် အခမ်းအနား များ ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိကြပြီး ထိုင်း ရုပ်မြင်သံကြား လိုင်းများ နှင့် ရေဒီယို လိုင်း များတွင် ထိုင်းနိုင်ငံတော်သီချင်းအား တစ်နေ့လျှင် နှစ်ကြိမ် ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိသည်။
ထိုင်းပြည်သူများ ထိုင်းနိုင်ငံတော်သီချင်းအား မတ်တပ်ရပ်အလေးပြုနေသည်အား မြင်တွေ့ရစဉ်
↑ ตามที่ปรากฏประกาศเพลงชาติลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2477 ซึ่งตีพิมพ์ในราชกิจนุเบกษาเล่ม 51 ตอน0ง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2477 ได้พิมพ์ข้อความในวรรคนี้เป็น "แม้ถึงไทยไทยด้อยจนย่อยยับ" ซึ่งผิดจากลายมือต้นฉบับของฉันท์ ขำวิไล ซึ่งเขียนไว้ว่า "แม้ถึงภัยไทยด้อยจนย่อยยับ" ทำให้อ่านไม่ได้ความหมาย ในบทความนี้จึงถือเอาความตามลายมือของฉันท์ ขำไว้ไลแทนฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ดู สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. ความเป็นมาของเพลงชาติไทยปัจจุบัน. หน้า 45 - 46
↑ ความเป็นมาของเพลงชาติไทยปัจจุบัน Archived 2008-04-09 at the Wayback Machine. by Somsak Jiamthirasakul (TU Journal, Vol. 27, No. 1, December 2004) (ထိုင်း)
↑ History of Thai National anthem from Banfun.com (ထိုင်း)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖလင်း_ချတ်&oldid=498639" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။